Keep It Constitutional | Uyini uMthethosisekelo? - Keep It Constitutional
Uma ungagugula la magama ‘Uyini uMthethosivivinywa?’, kungenzeka uthole umphumela osho into ecishe ithi, “uMthethosisekelo isethi yezimiso noma izinto ezake zenzeka kuqala esekuthathelwa kuyo umbuso noma umhlangano okwenganyelwa ngakho.”
Uhhhh, kuyabongwa u Wikipedia, kodwa ngempela usho ukuthini?
Ngokomthetho, uMthethosisekelo uhla lwamalungelo abantu kanye nemihlahlandlela ehlala enhliziyweni yezwe futhi utshela thina zakhamizi zalelozwe ukuthi kumele sisebenzisane kanjani nohulumeni wethu kanye nathi sisodwa.
UMthethosisekelo usitshela ngalelozwe, futhi amalungelo afakwe kuMthethosisekelo avame ukusitshela okuningi ngomlando walelozwe kanye nezinkinga zalo zangaphambilini.
Abanye abantu bathi uMthethosisekelo ufana neresiphi yesizwe esiphumelelayo: imithetho ekuMthethosisekelo ayizithako, futhi uma usipheka kuhleze kunconywa ukuthi ulandele iresiphi ukuze uthole imiphumela emihle kakhulu! Ukungabi nayo iresiphi…lokho kuyiresiphi yenhlekelele.
Ngabe onke amazwe anawo uMthethosisekelo?
Akuwona wonke amazwe anoMthethosisekelo obhalwe phansi, kodwa onke amazwe anayo Isethi yezimiso Ezeseka umthetho walelozwe. Amanye amazwe, njengeNingizimu Afrika abhale uMthethosivivinywa efaka onke amalungelo kanye nemihlahlandlela kwezwe emqulwini owodwa, kanti amanye, njenge-United Kingdom kanye ne-New Zealand enoMthethosisekelo “ongabhaliwe” okusho ukuthi imithetho yamazwe abo itholakale emiqulwini eminingi, hhayi kowodwa.
UMthethosisekelo waseNingizimu Afrika
UMthethosisekelo waseNingizimu Afrika ubaluleke kakhulu futhi uhlukile ngoba awusho nje kuphela ukuphela koBandlululo kanye nokuqaliswa kwezwe lothingo lwenkosazane olukhululekile futhi olunobulungiswa, kodwa uthathwa njengomunye ohamba phambili emhlabeni wonke jikelele. Ungathola kabanzi ngoMthethosisekelo waseNingizimu Afrika ngokucofoza lapha.
Ezinye izingcoco ezihambelanayo
Umqulu wamaLungelo – amalungelo abalulekile
UMqulu wamaLungelo: amalungelo ayi-10 abalulekile Amalungelo abantu ayingxenye abalulekile ezimpilweni zabo bonke abantu, amalungelo wena, […]
Yingani kumele sibe nendaba noMthethosisekelo?
UMthethosisekelo ungumqulu obalulekile futhi onamandla kakhulu eNingizimu Afrika UMthethosisekelo ubala wonke amalungelo kanye nezibopho bonke […]
UMthethosisekelo waseNingizimu Afrika “UMthethosisekelo wethu ungumqulu obaluleke kakhulu ezweni lethu. Usinika amalungelo kanye nezibopho okusifanele […]